Masinina manamarika teboka
Masinina fanapahana laser laser
Masinina fanapahana laser tsy vy
Masinina fanadiovana laser
F1: Ahoana ny fiantohana?
A1: antoka maharitra 1 taona, ny masinina misy ampahany lehibe (tsy ankoatry ny entana azo ampidirina) dia ovaina maimaimpoana (ampahany sasany no tazonina) raha misy olana mandritra ny vanim-potoana fiantohana.
F2: Tsy haiko hoe iza no mety amiko?
A2: Azafady mba lazao ahy ny anao
1) Max haben'ny asa: misafidy modely mety indrindra.
2) Fitaovana sy hatevin'ny fanapahana: misafidy hery mety indrindra.
F3: Fe-potoana fandoavam-bola?
A3: Alibaba varotra antoka / T / T / West Union / Paypal / L / C / Cash sns.
F4: Manana antontan-taratasy CE sy antontan-taratasy hafa ve ianao hanadio ny fadin-tseranana?
A4: Eny, manana ny Original isika. Amin'ny voalohany dia hasehoko anao ary Ary aorian'ny fandefasana entana dia homenay anao CE / FDA / Taratasy fiaviana / Lisitra fanangonana / faktiora ara-barotra / Fifanarahana fivarotana ho an'ny fahazoan-dàlana.
F5: Tsy haiko ny mampiasa aorian'ny nahazoako na manana olana aho mandritra ny fampiasana, ahoana no hatao?
1) Manana torolàlana momba ny mpampiasa amin'ny antsipiriany miaraka amin'ny sary sy horonan-tsary izahay, afaka mianatra tsikelikely ianao.
2) Raha manana olana ianao mandritra ny fampiasana dia mila ny teknisianinay ianao hitsara ny olana any an-kafa dia ho voavahanay. Afaka manome mpijery ekipa / Whatsapp / Email / telefaona / Skype miaraka amin'ny cam izahay rehetra
vita ny olana.
3) Tongasoa eto amin'ny orinasa misy anay foana ianao ary maimaimpoana ny fiofanana.
F6: Fotoana fanaterana？
A6: fanamboarana ankapobeny: 7 andro. Namboarina: 7-10 andro fiasana.
F7: Ampitahao amin'ny mpamatsy hafa, inona ny tombotsoan'ny orinasao?
A7: Fiainana folo taona amin'ny sehatry ny laser. Ny injeniera matihanina dia manohana ny zavatra ilainao.
F8: Ampitahao amin'ny mpamatsy hafa, inona ny tombotsoan'ny masininao?
Ny faritra rehetra ampiasainay dia marika am-boalohany sy malaza amin'ny safidy: Raycus; JPT; MAX.
Ary afaka manome fahafaham-po ny fitakiana fanaingoanao rehetra izahay.
F9: Ahoana ny fomba hisafidianana laser mety?
Ny laser laser dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny fitaovana vy rehetra, toy ny vy vy, aliminioma, sns.
Ny laser laser dia mety kokoa amin'ny fitaovana tsy metaly, toy ny hazo, hoditra, sns.
UV laser dia natao ho an'ny vy sy tsy vy, indrindra ho an'ny vera, kristaly.
Manohana ny serivisy fanaovana santionana maimaimpoana izahay, raha tsy azonao antoka ny valin'ny fanamarihana dia hitsapana anao izahay.
F10: Te hivarotra ny entanao eo an-toerana aho, ahoana no tokony ho mpaninjara anao?
A10: Manana rafitra maso ivoho efa miorina tsara izahay, faly izahay miara-miasa aminao, raha te-ho mpizara izahay dia mifandraisa aminay mba hahitanao vahaolana amin'ny antsipiriany.
Telefaona: +86 0531-8802 2462
Ny lehibe kokoa ny hery, ny lehibe kokoa ny angovo laser output, ary ny tsotra kokoa ny marika lalina. Na izany aza, ny herin'ny famoahana dia tsy maintsy faritana arakaraka ny fitaovany. Tsy hoe arakaraka ny haavon'ny herinaratra, ny bette ...
Ny tantaran'ny divay tamin'ny arkeolojia tany am-boalohany dia azo nakarina tany Mesopotamia tamin'ny vanim-potoana Neolithic 10.000 talohan'i Kristy. Tamin'ny vanim-potoana Neolithic tokony ho 9.000 taona lasa izay, varimbazaha sy voankazo no nampiasaina hanaovana divay ....